China Factory ire ahaziri carbide egwe ọka ite tungsten carbide efere / ite / ngwa agha emepụta na suppliers | Zhongfu Cemented
Ọrịre ụlọ ọrụ ahaziri agbacha agba agba tungsten carbide efere / ite / ngwa agha
ngwa ngwa carbide efere
tungsten carbide nnukwu efere ngwa agha
Akụkụ Ngwá Ọrụ Ike, Akụkụ Ngwá Ọrụ
1. Kwesịrị ekwesị maka ihe atụ siri ike na abrasive wdg.
2. A na-etinye maka Tungsten carbide ball mill ite a na-eji dị ka ite egweri nke igwe ihe igwe mbara ala dabara na tungsten carbide.
nke kwesịrị ekwesị maka egweri ihe dị elu dị ka ntụ ntụ siri ike, ntụ ntụ diamond, na silicon carbide ntụ ntụ.
Akụkụ: ntọala ahaziri iche na eserese ndị ahịa ma ọ bụ ihe nlele.
Mpekere: 25ml ~ 1000ml
Oke Ibu Ibu: ike 2/3 nke ite egweri
Ihe mejupụtara kemịkalụ isi: WC (94%,92%,85%),Cobalt (6%,8%, 15%)
Ọgwụgwọ elu: oghere ma ọ bụ mechaa
Nguzogide abrasion: dị ezigbo mma
Mgbakwunye: mkpuchi na roba sealing gasket
Bọọlụ na-egweri: bọọlụ tungsten carbide agwakọta (kwesịrị inye iwu iche)
Isi ike: 92.1HRA
"Quality first, Honesty as base, Ezinụlọ ọrụ na ibe uru" is our idea, in order to develop continuously and follow the excellence for Best quality China Custom Size Shaping Mode Punching Mold Tungsten HSS Mold Punch Carbide Pins CNC Machining Parts, We welcome new na atụmanya ochie site n'ụdị ndụ niile ka ị kpọtụrụ anyị maka mkparịta ụka obere azụmaahịa na-aga n'ihu na mmezu otu!
China kacha mma DIN9861, DIN1530, Ndị ọrụ anyị niile kwenyere na: Ogo na-ewuli taa na ọrụ na-emepụta ọdịnihu. Anyị maara na ezigbo mma na ọrụ kacha mma bụ naanị ụzọ anyị ga-esi nweta ndị ahịa anyị na iji nweta onwe anyị. Anyị na-anabata ndị ahịa niile okwu ka ha kpọtụrụ anyị maka mmekọrịta azụmahịa n'ọdịnihu. Ngwaahịa anyị kacha mma. Ozugbo ahọpụtara, Zuru okè ruo mgbe ebighị ebi!
N'ịrapagidesi ike na ụkpụrụ nke "Super Good quality, afọ ojuju ọrụ" , Anyị na-agbalịsi ike nweta a kediegwu azụmahịa Enterprise onye mmekọ nke gị maka nrụpụta ụlọ ọrụ maka China Carbide Pin dị ka a Wear Part Jiri maka Hpgr, Onye ọ bụla nke echiche na azum na-aga. a ga-enwe ekele dị ukwuu! Ezi nkwado nwere ike ime ka onye ọ bụla n'ime anyị nwee ọganihu ka mma!
Ụlọ ọrụ nrụpụta maka China Hpgr Studs, Carbide Stud, Anyị na-atụ anya ịnye ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ na ahịa ahịa ụwa; anyị malitere usoro njiri mara ụwa anyị site n'inye ihe anyị kacha mma n'ụwa niile site n'aka ndị mmekọ anyị a ma ama na-eme ka ndị ọrụ ụwa na-aga n'ihu na teknụzụ ọhụrụ na mmezu nke anyị.
ahaziri tungsten carbide dabara ikiaka tee c ...
Ụdị ahaziri nha tungsten cemented carbide...
Hazie ezigbo mma nkenke metal akụkụ sp ...
ahaziri tungsten cemented carbide ngwaike p ...
Tungsten Carbide Vs Carbide, Carbide Punch ma nwụọ, Akụkụ Carbide Yiri, Nkọwapụta Cnc Machining China, Dureza Del Titanio, Akụkụ omenala & eyi,